Qabsoon Oromoo qooda keenyaan mirkanaa’a!! | QEERROO
Qabsoon Oromoo qooda keenyaan mirkanaa’a!!
(Qeerroo, Finfinnee, 01 Bitootessa 2012) Qabsoo Bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoon durfamu cinaa dhaabbachuun dirqama Oromummaa bahuun lammiilee hunda irraa akka eegamu Qeerroon ibse.
Haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru irratti Qeerroon akka ibsetti, gaaffii mirgaa keenya karaa nagaa argachuuf tattaaffiin haga ammaatti godhame hammeenya sirna Wayyaanee sirriitti adda baasee mul’isee jira.
Akka ibsa Qeerroo kanatti yeroo ammaa kana diddaa ummataa karaa hundaan kan itti fufe yoo ta’u sirni Wayyaanees diddaa fi fincila sadarkaa addaddaatti adeemaa jiru dhaamsuuf humna qabdu maraan hojjachaa jirti.
Haata’uutii, Qeerroon doorsisaa fi hiraarsaa Wayyaaneef otuu gurra hin kenniin mallattoo BILISUMMAA Oromoo kan ta’e, Alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo , dhaabbiilee barnootaa gurguddoo kanneen akka Finfinnee, Amboo fi bakkeewwan birootti Oromiyaa irratti balaliisisaa jira.
Shirri diinni xaxxus sadarkaa addaddaatti tooftaa Qeerroon tolfatee socho’aa jiruun akka fashale illee ibsi Qeerroo kun hubachiisee jira.
Qeerroon gidduu kana Oromiyaa keessatti Alaabaa Oromiyaa balaliisaa kan jiru yoo ta’u, jabina Qeerroo kanaan kanneen Qabsoo Bilisummaa Oromoo barbaadan kan gammadanii, kanneen diinaaf ulee ta’an immoo dhiphuu keessa galanii akka jiran beekamee jira. Qeerroon yeroo ammaa biyya abbaa isaa irratti alaabaa mataa isaa muldhisaa jira.
Guyyaa Har’aa Yuunivarsiitii Finfinnee keessattii fi bakkeewwan waajjiroota gurguddootti alaabaan fannifame waraana mootummaa wayyaanee jeequun Finfinneen konkolaataa waraanaan guutamtee jirti.
“Yoomuu qabsoon keenya hanga bilisummaatti akka itti fuftus ni hubachiisna,” kan jedhan deeggarottti Qeerroo, “yeroo hamtuu akkanaa keessatti taa’anii waleeguu fi walqocholuu irra karaa itti qabsoon Oromoo gara galiitti dhiyaacha kan jiru ta’u, “kan arge haa amanu; kan dhaga’e immoo haa dabarsu!” jechaa ilmaan Oromoo cufti dirqama Oromummaa akka ba’atan Qeerroon dhaamsa dabarsee jira!
1 thought on “Qabsoon Oromoo qooda keenyaan mirkanaa’a!!”
buro on March 1, 2012 at 9:39 am said:
jabaadhaa guyyaan dhugaa san fagoo miti ..